किन बिचौलियाको बिगबिगी नेकपामा ? «
किन बिचौलियाको बिगबिगी नेकपामा ?
प्रकाशित मिति : 29 June, 2019 12:41 pm
डा. बद्रीविशाल पोखरेल कुनै पार्टी विचार सिद्धान्तका सवालमा अलमलमा पुगेपछि सिद्धान्तमा चल्ने कम्युनिस्ट पार्टी नै पनि पिँधबिनाको लोहोटा हुनपुग्छ । यस्ता अलमलले पार्टी गन्तव्यहीन हुनेछ ।
अहिले आएर यस पार्टीमा तात्कालिक कार्यनीतिको विषयको बहस तीव्र रूपमा सतहमा आएको देखिन्छ । तर यो तीव्रता केही मिडियामार्फत् उछालिएको पनि अनुभूत हुन्छ । नेपालका कतिपय मिडियाहरुमा त नेपाल विरोधी लेखहरु पनि पर्याप्त नै छापिएका थिए । जब नेपाली मिडिया बाह्य लगानीका भरमा चल्छन् तिनले जसको सिता खान्छन्, त्यसकै गीत गाउने नै भए ।
यहाँ विचौलिया त झन् खतरनाक देखिन्छन् । पार्टीमा सिद्धान्तको सबालमा तर तथापि परन्तु र किन्तुको गुन्जायस हुँदैन । जननेता मदन भण्डारीले जुन तर्क, तथ्य, आधार तथा दूरदृष्टिकोणका साथ जबजको समग्र प्रतिपादन गर्ने कामको अगुवाइ गर्नुभयो । त्यसबेलाका कतिपय ढुलमुले नेताहरुलाई आफू एक्लै भए पनि यस विचारमा अडिग रहने अडान मदनले राख्नु भएको सम्झना होला ।
तर सरकार विषयविज्ञ चयन गर्न नसेकेर पटक पटक थला परेको देखिन्छ । बिचौयाहरु भने दिव्य बाह्र वर्षसम्म पनि पाँडेपजनीमा परिरहन्छन् । अभर परेका बेला कहिल्यै काम नलाग्नेहरु नै सत्ता र सरकारका वरिपरि झिँगाझैँ भन्किन्छन् तर तिनीहरु जहाँ जहाँ पुग्छन्, औँसाहा पनि पार्छन्, पार्छन् । रातोपाटीबाट